Bakhala ngothishanhloko eWillowfontein | News24
Bakhala ngothishanhloko eWillowfontein
UMPHAKATHI waseWillowfontein uthi awusamfuni uthishanhloko wasesikoleni iWillowfontein uMnu Fanyana Mnguni.
Lamalunga omphakathi asola uMnu Mnguni ngokuhluleka ukulawula isikole selokhu angena kulesikhundla eminyakeni eminingi eyedlule.
Amanye amalunga omphakathi agasele emasangweni akulesi sikole ngoMsombuluko mhla ziyi-9 kuNdasa (March) nalapho kade bethi bazovimba khona uMnu Mnguni angangeni emagcekeni akulesi sikole.
Ngesikhathi i-Echo ifika kulesi sikole ngawo uMsombuluko abafundi kanye nothisha bebekwazi ukungena ngaphakathi esikoleni kodwa amalunga omphakathi abeqhingqe ngaphandle kwesango.
Amalunga omphakathi akhulume ne-Echo asole uMnu Mnguni ngokuba ngundlovukayiphikiswa futhi nokungafuni ukulalela abanye abantu ehleli efuna ukuthi kwenziwe izinto ngendlela yakhe.
Ngonyaka owedlule abafundi bebanga lika-Grade 10 kulesi sikole kuthiwa bebengenaye uthisha obafundisa isifundo i-maths literacy kwaze kwaphela unyaka. Kuthiwa uthishanhloko wathi ukhohliwe ukufuna uthisha wathi abazali abangakhathazeki abafundi bazowathola amamaki aso lesi sifundo yize bengazange basifunde.
“Abafundi bebethola o-30% ngoba kuthiwa abazange bafunde. Namanje uze wathatha omunye wothisha okhona ngaphakathi esikoleni ukuthi kube nguyena ovala lesi sikhala sokufundisa i-maths literacy.
“Sesizamile kakhulu ukuba nemihlangano ukuthi sixoxisane nothishanhloko ukuzama ukuthola isixazululo mayelana nezinkinga ezibheke nalesi sikole kodwa kunhlanga zimuka nomoya ngoba ngaso sonke isikhathi uhleli ezokwenza into ethandwa uyena.
“Kumanje ubegundisa izingane zesikole utshani kodwa ikhona imali yesikole akafuni ukuyisebenzisa. Njengoba eyibekile uyibekele ukuyenzani? Ngisho nesigingu esimele abazali naso usesehlulile ngoba ngaso sonke isikhathi uhlezi ezokwenza into efuna uyena,” kubeka uSimo Mshengu oyilunga lomphakathi aphinde abe nguSihlalo we-YCL khona endaweni.
Uqhube wathi bona bengumphakathi angeke baze bakuphazamise ukufunda kodwa bazokwenza isiqiniseko sokuthi uMnu Mnguni akaphinde alubhade kulesa sikole.
“Njengoba singawavalile amasango esikole kukhomba kona ukuthi asifuni kuphazamiseke ukufunda.
“Asisafuni ukuxoxa lutho naye ngoba ayikho into esazolunga vele sifunda ukuthi uMnyango wezeMfundo umthathe usinikeze omunye uthishanhloko ozimesele ngokwenza umsebenzi wakhe athathe isikole asiyise phambili,” kubeka yena.
Elinye ilunga lomphakathi liveze ukuthi uthishomkhulu akanandaba nesikole kangangokuba kunezintambo zikagesi ezilengayo emagumbini okufundisa esekuphele isikhathi zingalungiswa nabathi kuyingozi kakhulu kwazise kufunda nezingane ezincane kulesi sikole.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo esifundazweni saKwaZulu-Natal uMnu Muzi Mahlambi uthe bazothumela ithimba lesiFunda saseMgungundlovu ukuba siyokwenza uphenyo kulesi sikole.
“Ithimba elizothunyelwa kulesi sikole lizokwenza umbiko uma ngabe kutholakala ukuthi zonke lezi zinsolo ziyiqiniso kuzobe sekuthathwa izinyathelo. Awukwazi ukuthi izingane zingangaba naye uthisha unyaka wonke, kodwa zithole amamaki.
“Lawo amamaki ziwathathaphi zingazange zifunde? Ukunikeza umfundi amamaki engazange afunde kuyicala kwakona loko. Lolu daba sizolusukumela phezulu ngoba lezi zinsolo zijulile,” kubeka yena.
Imizamo yokuthola ilunga lesigungu esimele abazali kulesi sikole yonke ayiphumelelanga kwaze kwashaya isikhathi sokushicelela.